Laanta socodaalka Iswidhan oo wabarasho siineysa shaqaalaheeda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Migrationsverketshandläggare ska utbildas i hbt-frågor
Laanta socodaalka Iswidhan oo wabarasho siineysa shaqaalaheeda
La daabacay torsdag 23 juli 2009 kl 14.33
Migrationsverkets handlägare Foto:Björn Larsson Rosvall / SCANPIX
Laanta socdaalka Sweden ayaa bilaabaya mashruuc cusub oo luugu talagalay in howlahadeena gacan yare-yaasha ah la siiyo koorosyo su’aalaha quseeya waxa loo yaqaano homosexuella, bisexuella-ha ama qasniiyada.
Mashruucan ayaa howlgelintiisa waxaa gacan ka geysanaya EU-da, taasoo macnaheeda tahay in gacanyareyaasha ka shaqeeya laanta socdaalka ay helaan aqoon ku saabsan arrimahaas iyo shaqsiyaadka soo galootiga ah oo magangalyada dalkan weydiista oo arrimahaasi isku dhiiba.
Gabadha mashruucan hogaanka u heysa ee la yiraahdo Sofia Sjöö ayaa xustay iney jirto baahi balaaran hadana degan oo u baahan aqoon ay u yeeshaan howladeenadu laanta su’aalaha arrimahaasi quseeya.
” Waxaanu ka fekereynaa iney tani tahay su’aalo caadil ah oo had iyo goor u baahan iney hagaato. Shaqooyinkeena waa kuwo maalin walba noqdo la kulanka dadka arrimahaas u janjeera. Ka hey’ad ahaan iyo ka shaqaale ahaan waa mid ka reebeysa muctamaca in aqoonsi ku saabsan jigisiiga kaarto loo sameeyo. Sidaasi daraadeed wa muhiim in ka abuuro fahan guud iyo aqoon quseeysa dhamaan hey’ada socdaalka”
Sofia waxey sheegtay in laantu hey’ashay lacag gaareysa sadex malyan oo ay ugu deeqeen Midowga Yurub qeybteeda qaxootiga miisaniyadeda quseysa, si howlahan loo dar dargeliyo. Mashruucan quseeya arrimaha jinsiga ayaa magaciisa noqonaya Migrationsverket Beyond Borders” islamarkaasina socon doona tan iyo dhamaadka sanadka soo socoda.
Hafka laga leeyahay mashruucan ayaa ah in howladeena ah gacanyareyaasha laanta socodaalka iney u yeeshaan foojignaan la xirriirta shaqsiyaadka jinsiga homsexuell-ka ah marka ay la kulmaan. Qorshaha ku dhex jira macruucan ayaa waxaa kamid ah iney halkaasi cilmi baareyaal hubin doonaan ilo wargaleedyada laanta socodaalka adeegsan doonto kuwaasoo la xirriira qaniisyada.
Kooxo kale oo cilmi baareyaal ah ayaa igana qoraal iyo falanqeyn ku sameyn doona baadhitaanada qaxootanimo ee wadamada kala duwan ee Yurub kuwaasoo aragti muuqaal ahaaneed sameynaya.
Toddobaadka dambe ayey laanta socdaalka qorsheyneysa inta lugu jiro mehrijaanka pride ee Stockholm ka dhici doono lugu jiro ay diyaarin doonaan warkshop-yo ay dadweynuhu ku ogaanayaan sida laanta socdaalka sharci ahaan arrimahaasi baraktiko ahaan u waafajinayo.
Ardeshir Bibakabadi waa madaxa waxa loogu yeero Homan oo ah jaaliyad ay dadka ajanabiga ee dhinaca qaniisnimada u janjeera ka tirsan yihiin, waxaana uu soo dhaweeyey dar dargelinta howshan waxaana uu sheegay iney habooneyd in shaqaalaha laanta socdaalka ogaadaan in dadka qasniinta ah ay markasta dalalka qaarkood ay ka adag tahay halkan Sweden ah. Tusaale ahaan Iiraan oo isagu asal ahaan ka soo jeedo, lagana hadli karrin arrimahaasi.
” Lagama aan gabad laheyn loogama hadli karro haddii aad tahay qaniis. Waxaa loo arkayaa wax aad qurun u ah, haddii xitaa aan halkan dhowr sannodeganaa wey igu adag tahay inaan si qarsoodi laheyn uga hadlo ama aan i iraahdo waxaan ahay qaniis”
Sanadku markuu ahaa 2006-dii ayaa Sweden waxaa laga dhaqan geliyey qaanuun sheegaya in dadka qasniisnimada u janjeera loo fududeeyo iney helaan badbaado kuwaasoo dalalkooda lugu soo bahdilay kalana soo cararay. Madeliene Seidlitz oo iyadu ah madaxa sharciyqaanada ka tirsan hey’ada Amnisty ayaa sheegtay in loo baahan yahay xaqiiqtan ahaan in howlwadeenada laanta socdaalka la wanaajiyo aqootooda marka ay la kulmayaan shaqsiyaadka noocaas ah ee aaney buuxin oo keliya aqoonta teori- ahaaneed.
” Waa mowqif su’aal oo quseysa u nasiib dabacsanaanta shaqsiyaadka qaniisinta ah, marka lala macaamiltamoonayo dadka ka yimid dalalka kale waxaa in la fahmaa iney jiraan wax badan oo aan la fameyn. Haddii ay dhacdo ra’yi noocaas ah waxaa markaa imaaaneysa mid ka dheer inta aan hada oolin.”
Laanta socodaalka Iswidhan